Ndeipi tafura yekicheni yakanyatsokodzera imba yako - Fenicha - kurudziro
Ndeipi tafura yekicheni yakanakira imba yako
28 Kurume, 2020 Kukadzi 16, 2021 arun Imba yekubikira, Kicheni yanhasi
Kusarudza iyo chaiyo tafura yekicheni inogona kuve inoshungurudza chiitiko, kunyanya kana iwe usingazive chaizvo zvauri kutsvaga. Mikana yacho haina magumo uye kana tikatanga kutenga tisina ruzivo, isu tinovimba nekutongwa kwemutengesi. Munguva yakapfuura, kusarudza tafura yekicheni raive basa riri nyore. Iwe wakaenda kuchitoro ndokuunza kumba tafura inokwana mukamuri rako rekudyira uye nehurongwa hwako hwemari. Kusarudza macheya akakodzera yaivewo isiri dambudziko, sezvo matafura aya aive atotengeswa mumaseti uye pakanga pasina zvakawanda zvingasarudzwa kusarudza.
Imwe yesarudzo dzekutanga dzaunofanirwa kuita kusarudza pane chimiro chetafura yekudyira yaunoda kutenga.
Yakasarudzika rectangular dhizaini
Iyo tafura yekudyara rectangular ndiyo inonyanya kufarirwa pane dzakawanda sarudzo. Inopa yakachena uye yakatsanangurwa-mitsara yakatwasuka uchinyatso kuzadzisa zvaunoda. Kunyangwe iri yekudya kukuru kwemhuri kana mutambo uine shamwari, tafura yakadai ndiyo inomugamuchira!
Round tafura: chengetedza nzvimbo
Round uye oval kicheni tafura dzinozivikanwa mumakamuri ekudyira madiki uye mafurati. Round tafura zvakare inobatsira kugadzira iyo inoverengeka nharaunda, uye munzvimbo inotungamirwa netambo dzakatwasuka, shanduko inogadzirwa nemakwikwi inogamuchirwa.
Chii chako chimiro?
Kana iwe uchigara mufurati diki, girazi uye acrylic matafura anogona kuve akakunakira iwe nekuda kwehukuru hwayo, uye kune avo vanowanzo kuronga mapato, tafura yekutambanudza ndiyo mhinduro kwayo. Iyo yazvino maitiro yazvino yadzokororwazve tafura yemapuranga, uye nekuwedzera kwevatengi kuziva nezve nharaunda, zvinoita senge zvine musoro sarudzo.
Mutemo wegoridhe ndewokuona kuti pane kanenge zana nemakumi masere - masendimita kubva pakati petafura nemidziyo inosangana nemadziro. Izvi zvinopa yakawanda nzvimbo yekufamba-famba patafura uye inovimbisa kuti vanhu vanogona kusimuka nekugara pasi vasina kurovera muzvigaro.
Matipi ekusarudza tafura yekofi
Zvakadii nechena kicheni kaunda